राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि शैक्षिक मजदुर एक हौ ं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि शैक्षिक मजदुर एक हौ ं
राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि शैक्षिक मजदुर एक हौ ं
Posted by: युगबोध in विचार November 13, 2017	0 93 Views
सम्पूर्ण इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, विवे कशील, दे शभक्त, विद्वान, बुद्धिजीवी, सहयात्री शै क्षिक मजदुर, एक हौ ं को आवाज घन्काउ“दै आउनुभएका मे रा आत्मीय मित्रहरुमा सम्झना, अभिवादन, नमस् कार †
मित्रहरु तपाइ“ हामी ने पालका शै क्षिक मजदुर, हामी अपजस, गाली, अपमानभित्र धम्की, त्रास, आरो प, प्रत्यारो पबीच रमाइरहे का छौ ं । तर हामी हाम्रो पे शा, नै तिकता, कर्तव्य, अनुशासन, दक्ष, निडर, साहसका साथ किन मुकाविला गदैर् नौ ं ? हामीलाई १९ प्रकारका बनाउ“दासम्म मुस् िकलले पा“च सातजनाको भए पनि कमिटी निर्माण गरे र कसको भजन कीर्तनको साथमा झो लासमे त बो के र भरिया बन्दै जीवनको आहुति दिंदै हिंड्नुको पछाडि के रहस् य छ ? हामीलाई लाग्दै गरे का आरो प खण्डन गदैर् मिथ्या सावित गर्न किन सक्दै नांै ? हामीस“ग विगतको समीक्षा, वर्तमानको यो जना, भविष्यका यो जनाअनुरुप आफ्नो , आफन्त, सन्तान, राष्ट्र, राष्ट्रियताको लागि खाका के छन् ? के यो महान मातृभूमि, ती विचरा कलिला दुधे बालकका भविष्य निर्माणकर्ता हौ ं या समाज, सिंगो संस् था विगारे क हौ ं कि सुधारक हौ ं ? हामी किन दे शभक्ति, दे शप्रे मी, समाजसे वी, दक्ष, विवे की, बुद्धिजीवीको तप्कामा सम्बो धन नगनेर् ले अवसरवादी तप्काको आरो प सहनुपनेर् त्यति ठूलो अपराध के ग¥यौ ं ?
विगतदे खि वर्तमानसम्म आइपुग्दा कुन चाहि“ राजा, मन्त्री, सचिव, डाक्टर, इञ्जिनिएर, राजने तालाई शिक्षकले पढाएन ? सीता, भृकुटी, निडर, साहसी वीर जंगबहादुर, टुक्रिएको दे शलाई सिंगो एउटा ने पाल निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह आज विश्वमा आफ्नै नामको धर्म, विचार, ज्ञान बा“ड्न सक्ने वीर, महापुरुष, गौ तम बुद्ध, कलाका धनी भीम, गलाका धनी नारायणगो पाल, प्रथम बै ज्ञानिक गे हे न्द्र शमशे र, वै ज्ञानिक महान पुरुष कार्ल माक्र्स, नालापानी किल्ला कांगडामा हप्तौ ं दिन पानीसम्म नपिएर दुश्मनलाई पराजित गर्न सक्ने लौ हपुरुष वीर भक्ति थापा, अमरसिंह, बलभद्र कु“वर । यी विश्वविख्यात महान पुरुषका गुरु शिक्षक थिएनन् ? उनीहरुले शिक्षा कसबाट लिए ? खो इ हामीस“ग दम्भ ? के हामीले परो पकार से वा, स् वाधीनता, स् वावलम्बि, निडरता, साहस, हिम्मत, इमानदारिता, पादर्शिता, इख, राष्ट्रका वै भव, विभूतिका अनुभव बो के र दो षी चश्माहरुलाई चुनौ ती दिन सक्दै नौ ं ? हाम्रो कमजो री के हो ? हाम्रा समस् या के हुन् ? यी सबै सह्यौ ं भने हाम्रा सन्ततिले के गर्लान् ? उनको भविष्य कस् तो बन्ला ? फे रि पनि हामी निरीह बन्दै जा“दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, शै क्षिक जगत, मानव सभ्यताको के हाल हो ला ? हामीले यसतर्फ समयमै सो च्नै पर्छ ।
आलो चक हाम्रा शुभचिन्तक हुन् । सुझाव, सल्लाह दिने हाम्रो जीवनका अमूल्य सम्पत्ति हुन् भन्न किन नसक्ने ? सबै पक्षलाई समे टे र ऐ तिहासिक युगान्तकारी, राष्ट्र, समाज से वक बन्नुपर्छ । त्यसो गर्दा हाम्रा कमीकमजो री सुधार्नुपर्छ । भनिन्छ गल्ती औ ंल्याइदिने मित्र हो  । गल्ती सुधार गदैर् अघि बढ्नु महानता हो  । हाम्रो जस् ता संसारमै यस् ता स् वर्गपुरी दे श छै नन् । यहा“ कुनै चिजको कमी छै न । प्रकृतिको खानी, संसारकै गौ रवको गाथा बो के को उच्च हिम श्रृंखलाको दे श । जुनकुनै विरुवा, झारपात पनि औ षधिजन्य छ । पात, बो क्रा, जरा, पूmल सबै औ षधि बन्छन् । यस् तै अनगिन्ती विरुवाले ने पालको सौ न्दर्य मात्र नभइ जीवनबुटीबाट बने का जडीबुटीले विश्वलाई धाने को छ । हाम्रो यहा“ दालचिनी, धुसेर् टो जस् ता वस् तुहरु सो त्तर बनाएर अपमान गरिन्छ । त्यसै मा पनि कलकली बगिरहे को सफा पानी, स् वच्छ हावा, विभिन्न चराचुरुंगीले मनमो हक बनाएका छन् । विश्वकै दुर्लभ पाटे बाघ, एकसिंगे गै ंडा, मत्त हात्ती, जलघो डा, थुपै ्र जंगली, घरपालुवा जीवजन्त्ुले झनै विश्वका पर्यटकलाई आकर्षण गरे को दे ख्दा कसको मन नलो भिएला ? तर हामी ने पाली बुद्धिजीवी तप्का के गर्दै छौ ं ? हाम्रा कमीकमजो रीमध्ये महान गल्ती राजनीतिक झुटको खे तीभित्र फस् यो कि ?
वास् तवमा ने पालको राष्ट्र, राष्ट्रियतामाथि आ“च आउने कुकार्य भन्नु नै फो हो री, ढा“ट, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, लु्ट, फुटको राजनीति हो  । वास् तवमा भन्नुपर्दा विगतमा पढ्न नसके का, पढ्दापढ्दै राजनीतिको बहानामा जे ल पुगे का पढाइ बीचमै छो डे र बरालिएकाहरुले राजनीतिको नाममा, बम, गो ला, हतियार, लडाइ“, झगडा, काटमार गदैर् गए । त्यही तप्का राजने तासम्म हातो नातो बाट पुगे  । त्यसपछि उनीहरुले बुझे शिक्षकको जमात, शिक्षकको क्षमता, लागिपनेर् अकोर् लाई स् कूलिङ गनेर् क्षमता छ भन्ने बुझे रै फुटाउ“दा फुटाउ“दा ३० भन्दा माथि झण्डा, १९ प्रकारका शै क्षिक मजदुरको अवधारणा बनाए, पार्टी, ने ताको पिछलग्गु बनाएर रजाइ“ गरे  । कुर्सीमा नपुगुञ्जे ल गुरु भने जब ठाउ“मा पुगे त्यसपछि ठग, कामचो र, नक्कली, नै तिकता नभएका, अवसरवादीको संज्ञा दिन थाले  । अर्काथरि सुरक्षित कुर्सीमा पुग्ने ले आन्दो लनमा हो माइदिए । त्यही प्रतिफल हामी भो ग्दै छौ ं । हामीलाई आयो ग लड्नु भने को बाघस“ग पौ ठे जो री खो जे सरह हुने भो , सजिलै कसै को झो ला बो के र राजनीतिक नियुक्ति नै सजिलो खो ज्न थाल्यौ ं । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर ने ताको चाकडी, चुक्ली, धुपौ रे बन्दै जीवन र जगतको बारे मा बुझ्नु, बुझाउनु नै राजनीति हो भन्ने माक्र्सवाद विपरीत हुन थाल्यो  ।
आफै गुरु, गुरुआमास“ग लसपस हुन थाले पछि निरीह समाज, अबो ध बालबालिकाले के भन्ने ? समाजको आ“खा बने को शिक्षकलाई राज्यले धकेर् मास् टर बनाएको छ । हामी त्यहीभित्र विद्यालयमा विदा लिएर अन्य तालिम, काजमा पुग्ने मास् टर किन दुःख
गर्ला । यतिबे ला दे शको शिक्षा क्षे त्र, शान्ति सुरक्षाको क्षे त्र, निकै खल्बलिएर अस् तव्यस् ततातर्फ धके लिंदै छ । जतिबे ला बहुदलीय व्यवस् था, प्रजातान्त्रिक व्यवस् था भन्यौ ं उक्त व्यवस् था मन नपराउने को जमातले जनताले ल्याएको प्रजातन्त्रलाई दूषित बनाए, बदनाम गराए । ने पाली जनतासामु प्रजातन्त्र, बहुदल ठीक हु“दो रहे छ भन्ने गराए । फे रि पनि ने पाली जनताले जहिले पनि शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रको विकास, वाक स् वतन्त्रता, गुणस् तरीय शिक्षा, स् वास् थ्यको पक्षमा, रो जगारीको ग्यारे न्टी राज्यले गरो स्, गरिबी, बे रो जगारीको कारण विदे शका गल्ली धाउन नपरो स् भन्ने चाहनाकै कारण व्यक्तिहरुले जनयुद्ध, महान जनआन्दो लन गरे  । थुप्रै सपना, कल्पना गरे  । आशा भरो सा गरे  । फे रि संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्लाजस् तो दिनानुदिन लुटपाट, काटमार, भ्रष्टाचार, थिचो मिचो , चो री, डकै ती, बलात्कार, अपहरण, फिरौ तीको चपे टामा ने पाली दिदीबहिनीको अस् िमता लुटिदै गयो  । ने पाली दाजुभाइको हत्या, हिंसा बढ्दै जान थाल्यो  । विद्यालयहरु असुरक्षित छन् । विद्यालयमा गुणस् तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम बालमै त्री हुनुपर्छ । बालबालिका शान्तिका पुजारी हुन् भन्ने प्रमाणित उदाहरण अनुशासित समाज, नै तिकवान विद्यार्थीहरुको निकै आवश्यकता पनेर् गर्छ । त्यसो गर्दा अराजक व्यवहार गनेर् हरुलाई रो गी झार हटाएझै ं हटाउनुपर्छ । त्यसरी हटाउने बल प्रअमा हुनुपर्छ । तर आज कुनै शै क्षिक मजदुरको आ“ट त परै जाओ स् सानो कारवाहीसम्म गनेर् अवस् था छै न ।
कक्षामा हल्ला गनेर् लाई कडा स् वरसम्म बो ल्ने हिम्मत कसै मा छै न । यदि आ“ट गरिहाल्यो भने त्यही दिनको सा“झै , राति, घर फर्कदाको समय के हुने हो ? अपराध गनेर् ले गर्छ । धम्की दिने ले दिन्छ । शै क्षिक मजदुरस“ग मात्र बुद्धि छ, विवे क छ, क्षमता छ, दक्षता छ, सबै गनेर् हतियार कलम हो  । बो ली, व्यवहार हो , इमानदारिता हो  । कर्तव्य हो , सीप कला हो  । मूर्खको अगाडि यी सबै चिज, वस् तु कुनै कामयावी हु“दै नन् । सके ज्यानै लग्ला नभए घाइते बनाउला । त्रसित जीवन, अशान्त मन, डराउ“दै को बो लीले कसरी सिकाउन सक्ला ? कि जागिर छो ड्नै पर्छ  । कि त निरीह भई कान पाके को , कान नसुन्ने बहिरो सरी बने र जा दिन, आ रात भन्नुबाहे क अन्य कुनै हिम्मत हुन सक्दै न । त्यसै मा पनि एउटा विद्यालयमा दर्जन प्रकारका शै क्षिक मजदुर छन् । उनीहरुको से वा सुविधा पनि प्रकारकै छन् । मनमस् ितष्क पनि प्रकारकै बन्दो रहे छ । जे हो स्, झाल रहे बतिला लाग्छ, आमा रहे सन्तान रहन्छ भने झै ं राष्ट्र रहे जनता रहन्छ, राष्ट्र नै नरहे सक्दै न । त्यसै ले हामीमाथि जस् तो सुकै विभे दीकरणको व्यवहार किन नहो स्, भो कै बस् न, किन नपरो स्, आरो ह, अवरो ह बे हो र्नु किन नपरो स्, राष्ट्रको से वक नबुझ्ने मूर्खले जे ल, ने ल किन नहालो स्, जस् तो परिस् िथति भए पनि वर्षा, असिना, आ“धी, बे हे री जे आए पनि कर्तव्यबाट विमुख हुनुहु“दै न । इमानदारितामा कमी गर्नु हु“दै न । आ–आफ्ना विचार, आ–आफ्ना सो च, लक्ष था“ती राख्दै साना कलिला, नानीबाबुको लागि हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि सदा एकजुट हुनुको विकल्प छै न । हाल एउटै छाताको नाममा शिक्षक महासंघको अवधारणा आयो  । जसले ने पाली शै क्षिक मजदुरको समस् या हल गर्ने तर्फ भन्दा पुरानै शिक्षक युनियनको बलियो रुप निर्माण गर्ने तर्फ लागे को महसुस हु“दै छ । पुनः सम्पूर्ण ने पाली शै क्षिक मजदुर अटाउन सक्ने क्षमतावान, इमानदार, बलियो , (छाता) को अन्वे षण गर्नुको विकल्प छै न भन्दै पुनः एकजुटको आवाज जुट्दै जाओ स् ।
Previous: मधुमेहीको मुख स्वास्थ्य
Next: आवश्यकता पूर्ति र समस्या समाधानको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ
सामूहिकताको सफल प्रयोग रेडियो मध्यपश्चिम
संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन
धर्म परिवर्तन रोक्ने हो भने …..